Invastimantii guddina hawaasummaaf
Godina Arsii Aanaa Martii Gandaa Waatichaa Dolee keessaa abbootii warraa 200 oltu jiraatu. Naannawaan kun bu'uuraalee misoomaa akka bishaan, elektirikii, mana barnootaafi dhaabbilee wal'aansaa gahaatti hinqabu. Akka ragaan mul'isutti, hawaasni naannawichaa %84 ta'an wabii midhaan nyaataan kan of hindandeenye, %40 bishaan dhugaatii qulqulluu kan hinarganneefi, dubartoonni %40 ta'an manatti kan da'aniidha. Kanumarraa ka'uun Kaampaaniin Dhugaatii Wayinii Awaash naannawichatti hojii invastimantii irratti bobba'ee jiru cinaatti jireenya hawaasa naannawichaaf abdii guddinaa ta'uurratti argama.
Kaampaanichi gandicha keessatti kuufama bishaanii beelladootniifi hawaasni naannawichaa itti fayyadamu hojjeteera. Aaddee Soofiyaa Kadir bishaan kuufamaa kanatti uffaanaasaanii utuu miicatanii argine. Akkasaan jedhanitti, kuufamni bishaanichaa qulqullina uffanaafi dhugaatii beeyladootaaf kan gargaaru ta'us yeroo bishaan dhugaatii qulqulluu utuu hin argatin dhugaatiifis itti fayyadamaa turan.
Yeroo ammaa kaampaanichi bishaan dhugaatii qulqulluu naannawaasaanitti akka galcheef kan himan Aadde Soofiyaan, akkasumas mana barnootaa daa'immanii ijaaruudhaan daa'imman isaanii carraa barnootaa akka argatan taasiseera.
Jiraataadhuma godinichaa kan ta'an Obbo Addisuu Jaamboo gama isaaniitiin akka jedhanitti, duraan bishaan balfa garagaraa guuree ya'uufi qulqullina hinqabne dhugaatiif itti fayyadamaa turan. Daa'imman isaaniis bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuudhaan dhukkuboota garagaraatiif saaxilamaa turan. Yeroo ammaa garuu bishaan dhugaatii qulqulluu kaampaanichi galcheefitti fayyadamaa jiru. Akkasumas mana barnootaa ijaaruun, soolaariifi sunsuma amayyaa galchuufiin jireenya fooyya'aa akka jiraatan taasisaa jiraachuu dubbatu.
Naannawichatti hanqinni roobaa waan mul'atuuf gargaarsa mootummaan kennuufi deeggarsa midhaanii kaampaanichi isaaniif taasisuun jireenyasaanii geggeeffataa akka jiran himanii, haalli jireenya isaaniis kan duraaniirra fooyya'aa akka ta'es dubbatu.
Maanaajarri Misooma Hawaasummaa Kaampaanichaa Obbo Gannaa Jundii akka jedhanitti, dhaabbatichi hanga ammaatti qarshii miliyoona 1.2n ijaarsaa bishaan dhugaatii geggeessuun, naannawichatti abbootiin warraa 200 ta'an tajaajilamtootaa humna elektirikii ta'aniiru. Kana malees, hojjetootaa dhaabbatichaa naannawicha jiraataniif oyiruu qonna midhaanii kaampaanichaarratti boqqolloo omishuudhaan deeggarsa kan taasisu ta'uu dubbatu.
Kaampaanichi mana barnootaa naannawichaatti ijaaruudhaan hawaasni carraa barnootaa akka argatan taasisaa jira. Kana malees kaampaanichi fedhii tajaajila hawaasummaa garagaraa guutuuf hojjechaa jiraachuu himu.
Walumaagalatti, kaampaaniiwwan hedduun hojii invastimaatiirratti bobba'an bu'uuraalee misoomaa garagaraa ijaaruun hawaasa naannawaa fayyadamaa taasisuun hojiilee isaan irraa eegamaniidha. Kanaaf ammoo hojiin Kampaaniin Dhugaatii Wayinii Awaash Aanaa Martiitti hojjechaa jiru fakkeenya gaarii ta'a.
Torban kana/This_Week 12393
Guyyaa mara/All_Days 1821813